Quilotoa, इक्वेडरिया एन्डिज को एक मोती यात्रा समाचार
एनरिक गिलि | | इक्वेडर, सामान्य, मार्गदर्शकहरू, के हेर्ने, क्युटो
कुइलोटा इक्वेडरियन एन्डिसको ज्वालामुखी हो जसको क्रेटरले सामान्यतया क्रेटर ताल भनिने कुरा संचय गरेको हुन्छ। यो व्यास3किलोमिटर र करिब २ 250० मिटर गहिरो छ, जुन विश्वको सब भन्दा ठूलो र सब भन्दा ठूलो ज्वालामुखी ताल हो।
यो इक्वेडर मा पश्चिमी सबैभन्दा ज्वालामुखी हो र Cotopaxi राष्ट्रीय पार्क को हिस्सा हो। यसको पानीको रमणीय नीलो निलो रंग तालमा खनिजहरूको ठूलो मात्राको कारण हो।
यो डूबिरहेको क्याल्डेरा हो, यसको चिसोपन र लाभाले बिस्तारै यसलाई अभेद्य बनायो र ज्वालामुखीको निष्क्रियता र कुइलोटा जस्तो वर्षाको स a्ग्रहका कारण ताल बनाइएको थियो। अधिकांश ताल-ज्वालामुखीहरू अमेरिकी महाद्वीपमा छन्, युरोपमा हामी तिनीहरूलाई आइसल्याण्ड र पोर्तुगलमा भेट्टाउन सक्छौं।
यो इक्वेडर मा एक सबै भन्दा आकर्षक र आवश्यक यात्रा को एक हो। एन्डियन देश हुँदै प्रत्येक मार्गमा यस प्रकृतिको दृश्यको भ्रमण समावेश गर्नुपर्दछ।
1 Quilotoa कसरी पुग्ने?
2 Quilotoa मा के गर्ने?
3 लाटाचुंगा, Quilotoa को लागि सुरूवात पोइन्ट
Quilotoa कसरी पुग्ने?
सामान्यतया सब भन्दा छिटो बाटो लाटाकुंगाको शहरबाट हो, लगभग K 75 किलोमिटर (१ घण्टा र सडक भएर आधा)। तपाईं अम्बाटोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, १२० किलोमिटर जति लताचुंगा हुँदै देशको राजधानी क्विटोबाट पनि। मलाई लाग्छ कि क्विटोको दूरी यस क्षेत्रमा यात्रा गर्न धेरै लामो छ सब भन्दा महत्त्वपूर्ण चीज हराइरहेको छ।
त्यहाँ छन् ज्वालामुखीमा पुग्न दुई तरिका: कार द्वारा (या त निजी वा एजेन्सी स्थानीय गाइडको साथ) वा सार्वजनिक बस द्वारा लाटाचुंगाको मुख्य बस टर्मिनलबाट, अहिले त्यहाँ १ सिधा दैनिक बस छ जुम्बाहुआ शहरबाट वा यस शहरमा हरेक घण्टा बसहरू हुन्छन् र त्यहाँ एक पटक ट्याक्सीबाट क्वाइलोता जान्छन्।
मेरो मामलामा, मैले आदिवासी शहरहरूमा भ्रमण गर्न र ज्वालामुखीको उत्पत्ति र इतिहास र यस क्षेत्रको संस्कृति बुझ्नको लागि लाटाकुंगाबाट कार लिएर स्थानीय गाइड भाँडामा लिएँ।
मैले कोटोप्याक्सी ज्वालामुखीको लागि भनेकै तरिकाले, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ हामी लगभग 4000००० मिटर उचाईमा हुनेछौं। यदि हामी यसको प्रयोग गर्दैनौं भने हामीसँग टाउको दुख्ने र हिमाली बिरामी पर्न सक्छ। अलि अलि देशको उचाईमा अनुकूल हुन आवश्यक छ, तटबाट सिधै एन्डिजको उच्च क्षेत्रमा नजानुहोस् किनभने यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं न्यानो, हिमाल वा खेलको लुगा र उपयुक्त फुटवेयर लाउनुहोस्। तालमा जाने बाटो चिप्लो छ।
Quilotoa को सडक ठूलो सौन्दर्य को एक Andean पहाडी क्षेत्र को माध्यम बाट जान्छ। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ प्रमुख जनसंख्या आदिवासी हो। बिहीबार रमाईलो स्थानीय बजार साकिसिलमा आयोजित छ। यो शहर Quilotoa को आधा बाटोमा छ।
यो एक भ्रमण हो कि यो ल्याटाचुंगाबाट सुरू गरेर उही दिनमा गर्न सकिन्छ। जे भए पनि ताल तालमा र छिमेकी शहरहरूमा स-साना बासस्थानहरू रहेका छन् र इक्वेडरिया सरकारले अगुवाईमा ज्वालामुखीमा शिविर राख्न अनुमति दिन्छ।
यस इलाकाको आदिवासी कला र संस्कृति पत्ता लगाउन र यसको मज्जा लिन तपाई ज्वालामुखीमा पुग्नु भन्दा पहिले तपाईलाई १ वा २ रोक्न सिफारिस गर्दछु। यस क्षेत्रका मान्छेहरू कसरी बाँचिरहेका छन् हेर्न यो धेरै सुन्दर र रोचक छ।
त्यहाँ एकचोटि, तपाईंले पार्कि area क्षेत्र र स्वदेशी पसलहरूमा पहुँचका लागि पैसा तिर्नु पर्छ।
Quilotoa मा के गर्ने?
एकले सोच्न सक्ने विपरित, कार पार्क ज्वालामुखीको शीर्षमा छ र तल छैन। हामीले देख्ने पहिलो चीज भनेको टाढाबाट सबै भन्दा माथिबाट ताल हो। यो ज्वालामुखी हो कि यसलाई भ्रमण गर्न तपाई तल जानु पर्छ र माथि जानु हुँदैन।
Es इक्वेडर को सबै भन्दा प्रभावशाली छविहरु को एक: कार पार्क गर्नुहोस्, रेलिंग तर्फ हिड्नुहोस् (त्यस क्षणमा तपाईले केहि देख्न सक्नुहुन्न) र अचानक ज्वालामुखी र तालको विशालता हेर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई अवाक् पार्छ। कुनै पनि समयमा यसले तपाईलाई यस्तो अनुभूति दिलाउँदैन कि रेलिंग पछि मात्र तालको छेउमा बेंसी छ,3किलोमिटर चौडा र २ 250० मिटर गहिरो।
त्यहाँ एक पटक, यो चाखलाग्दो छ तालमा तल जाऊ। त्यसका लागि त्यहाँ एक मार्ग हो जहाँ एक ठूलो ढाँचा छ जुन क्रेटरमा झर्छ।
लगभग आधा घण्टामा तालमा सम्पूर्ण यात्रा सकियो। तपाईं सतर्क हुनुपर्दछ किनकि भुइँ एकदम चिप्लो छ। मार्ग अप कडा छ र अधिक गर्न १ घण्टा वा एक घण्टा र आधा आवश्यक छ, यद्यपि एक पटक तल तपाईं सेवा भाड्न सक्नुहुनेछ तपाईंलाई घोडामा सवार बनाउनको लागि।
त्यहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ ज्वालामुखीको fularoles नजिक हेर्नुहोस्जे निष्क्रिय भए पनि तालको तलबाट ग्याँसहरू हटाउँदछ। तपाईं सजिलै तालको किनारको अंश हिंड्न सक्नुहुन्छ।
लाटाचुंगा, Quilotoa को लागि सुरूवात पोइन्ट
म तपाईंलाई लाटाचुंगाको केन्द्र भ्रमण गर्न, यस शहरमा रहनुहोस् र भोलिपल्ट भ्रमणको लागि सिफारिश गर्दछु। यो "Quilotoa सर्किट" मा Quilotoa र Cotopaxi राष्ट्रीय पार्क को मुख्य प्रस्थान पोइन्ट मा सबै भन्दा ठूलो शहर मानिन्छ। यो एन्डिजको रणनीतिक बिन्दु हो (यो देशको लागि महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पनि हो)।
जनसंख्याको मुख्य आकर्षणहरू सबै हुन् १ ch औं शताब्दीदेखि नै यसको चर्चहरू केन्द्र र यसको क्याथेड्रलमा। यो कुनै धेरै पर्यटक शहर होईन र यसले एन्डियन इक्वेडरियनहरूको जीवन पद्धति मनन गर्न मद्दत गर्दछ।
कुनै श doubt्का बिना, Quilotoa ती स्थानहरू मध्ये एक हो जुन तपाइँले भ्रमण गर्नुभयो भने तपाइँले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। एक विशाल ज्वालामुखी र असाधारण सुन्दरताको ताल। म पूरै सिफारिश गर्दछु प्रकृतिको यो तमाशा हेर्नका लागि सक्षम हुन यदि तपाईं सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » इक्वेडर » Quilotoa, इक्वेडोर एन्डिस को एक मोती
लन्डनमा पनि आधुनिक वास्तुकला छ
एक सप्ताहन्तमा लन्डनको भ्रमण गर्नुहोस्